Xisbiga Wadani oo guul ku socda doorashada Somaliland maxaase laga filayaa isbedelse ma keeni karaa - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Xisbiga Wadani oo guul ku socda doorashada Somaliland maxaase laga filayaa isbedelse ma keeni karaa
Xisbiga Wadani ayaa guul ku socda doorashada Somaliland maxaase laga filayaa isbedelse ma keeni karaa. Doorashada maamulka Somaliland ayaa la filayaa inay dhacdo bisha soo socota.
Markaad si saxa u fiiriyo nidaamka qabiilka ku dhisan ee loogu tartamayo maamulka Somaliland gobolada hoostaga waxa markiiba kuu soo baxaya in xisbiga Wadani guushu raacayso.
Tusaale Xisbiga Wadani ayaa ku xoogan Hargeysa, Boorama, Burco iyo Ceerigaabo halka xisbiga Kulmiye ay u soo hartey Hargeysa iyo hareeraheeda oo qayba, Awdal oo inyara iyo Burco oo inyara hadayba cod ka helaan.
Musharax xisbiga Kulmiye ayaa ah musharax lagu muransan yahay loona haysto dambiyo farabadan oo uu ka galay gobolada maamulka taas oo nidaamka qabiilka ka sokow si xun u dhaawacdey oo xataa keentay inuuna cod balaaran ka helin beeshiisa.
Suaasha aad iswaydiin karto ayaa ah maxaa laga filayaa Wadani isbedelse ma keeni karaa.??
Markaad fiiriso musharaxa xisbiga C/raxmaan Ciro waxaad is odhan kartaa waa qunyar socod ilaa hadda aan la fahmeyn nidaamka dawladnimo ee uu la imaan doono iyo in waxa loo socdaa ay tahay kuraasta hore bedel kuwo kalana keen.
Waxase laga fahmi karaa maamulka uu la yimaado iyo talaabooyinka uu qaado. Isbedelka ugu weyn ayaa noqon doona inuu isagu ka jawaabi doono suaalaha dadku u baahan yihiin halka Siilaanyo uuna wax shaqo ah ku lahayn maamulka uu ku magacownaa.